Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » Ibhodi yoKhenketho yase-Afrika ixelele iAir France, siyakuthanda!
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiCote d'Ivoire • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zeGambia eziQhekezayo • IKenya Breaking News • Iindaba zaseMozambiki • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba
I-Air France inike nje ngaphezulu komqondiso wethemba kwiShishini lezoKhenketho laseAfrika.
IBhodi yezoKhenketho yase-Afrika inemincili yokufunda ngokwandiswa okucetywe yinkampani yenqwelomoya kazwelonke yaseFrance ngeli xesha lasebusika.
I-Air France ijonge ngethemba ekwandiseni ukufikelela kwayo e-Afrika xa umphathi wesizwe wase-France wazisa ngeshedyuli yasebusika ka-2021/2022.
I-AIr France izakwandisa uthungelwano lwayo lwehlabathi ukuya eZanzibar, eSeychelles Maputo naseBanjul
Usihlalo weBhodi yoKhenketho yase-Afrika uliqhwabela izandla eli nyathelo
Umoya waseFrance, isitayile njenge-AIRFRANCE, ngumthuthi weflegi waseFrance ozinze eTremblay-en-France. Lixhasi leQela loMoya-i-KLM kunye nelungu elisekwe kumanyano lwenqwelomoya ye-SkyTeam.
Ukuhamba kwe-COVID-19 nokhenketho oluya eAfrika kuhlala kungumngeni. Ukubonisa ukuzithemba kwe-Air France kubonisa ukuba i-Afrika iya kudala intembelo kolu shishino kwaye sinethemba lokuba phakathi kwabatyeleli abanokubakho.
EParis-Banjul kwiAir France
I-Air France izakuqala inkonzo eBanjul, kwisiXeko-dolophu saseGambia eNtshona Afrika.
IParis- iBanjul izakusebenza kwiAirbus A330 enezihlalo ezingama-224. Kubandakanya izithuba ezingama-36 kudidi lweshishini, uqoqosho lwama-premium angama-21 kunye nezihlalo eziyi-167 zoQoqosho.
IGambia lilizwe elincinci laseNtshona Afrika, liboshwe yiSenegal, linxweme elincinci laseAtlantic. Iyaziwa ngendalo eyahlukeneyo ejikeleze uMbindi weGambia. Izilwanyana ezininzi zasendle kwiPaki yeSizwe yaseKiang West kunye neBao Bolong Wetland Reserve kubandakanya iinkawu, amahlosi, iimvubu, iimpisi kunye neentaka ezinqabileyo. Ikomkhulu, iBanjul, kunye neSerrekunda ekufuphi zibonelela ngokufikelela kumanxweme. Inkonzo kufanele ukuba iqale nge-31 ka-Okthobha.
EParis- Maputo kwiAir France
Ikwaqala ngo-Okthobha u-31 yinkonzo entsha yeAir France eMaputo, eMozambiki.
Le ndlela intsha isiya eMaputo izakusebenza kwiBoeing 777-300ER enkulu enikezela ngeKlasi yokuQala, kwiShishini, kuQoqosho lwePremiyamu, nakuqoqosho.
IMozambiki luhlanga olusemazantsi e-Afrika olunonxweme olude lweIndiya olunamabhishi athandwayo anjengeTofo, kunye neepaki zolwandle ezingaselunxwemeni. Kwiziqithi iQuirimbas Archipelago, ekumgama oziikhilomitha ezingama-250 kwiziqithi zekorale, isiqithi se-Ibo esigutyungelwe ngamangrove sinamabhodlo exesha lobukoloniyali aphila ngexesha lolawulo lwamaPhuthukezi. I-Bazaruto Archipelago ekumazantsi emazantsi anezixhobo ezikhusela ubomi obunqabileyo baselwandle kubandakanya i-dugongs.
EParis- Abidjan kwiAir France
I-AF704 izakusebenza phakathi kweParis Charles de Gaulle idlula eBanjul iye eAbidjan eIvory Coast.
I-Ivory Coast kutsha nje ibambe uSihlalo weBhodi yoKhenketho yase-Afrika uCuthbert Ncube kwaye ukwikhosi yokonyusa ukuphuhlisa ukhenketho kweli lizwe laseNtshona Afrika.
ICôte d'Ivoire lilizwe laseNtshona Afrika elinendawo zokungcebeleka elunxwemeni, amahlathi ashinyeneyo kunye nelifa lobukoloniyali laseFrance. IAbidjan, kunxweme lweAtlantiki, liziko eliphambili ledolophu. Iimpawu zayo zala maxesha zibandakanya i-ziggurat enje, ikhonkrithi iLa Pyramide kunye neSt.Paul Cathedral, isakhiwo swooping esibotshelelwe emnqamlezweni omkhulu. Kumantla esithili seshishini, iBanco National Park yindawo emahlathini enemvula enentaba.
EParis- eZanzibar kwiAir France
Sele ngo-Okthobha u-18, iAir France izakuqhagamshela iParis kunye nesiqithi seeholide eTanzania, eZanzibar.
Le nkonzo izakusebenza ngokuma eNairobi, eKenya kwiBoeing 787-9
Ukhenketho eZanzibar lubandakanya ishishini lokhenketho kunye neziphumo zalo kwiziqithi zaseUnguja nasePemba eZanzibar indawo ezimeleyo kwiRiphabhlikhi yase-Tanzania.
EParis - iSeychelles kwiAir France
Ukhenketho lwaseSeychelles sele ibhengeziwe kwaye ndonwabile ukwamkela inkonzo eyi-A330-2200 ukusuka eParis ukuya kule paradesi ithetha isiFrentshi nesiNgesi. Inkonzo yaqala ngo-2019 yaza yaphazamiseka ngenxa ye-COVID-19.
Le nkonzo izakuqala nge-23 ka-Okthobha.
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika Usihlalo uCuthbert Ncube uxelele eTurboNews, wayechulumancile ngokwanda kwenethiwekhi yeAir France eAfrika. UNcube uziva ukuba olu luphuhliso oluqinisekileyo.